#Akhriso Habka loo Caburiyey Beelaha Dega Waqooyi Galbeed ee Siyaasiyiinta Beesha Maamusho Gobolada Waqooyi Ay Isticmalaan - Get Latest News From Horn of Africa
#Akhriso Habka loo Caburiyey Beelaha Dega Waqooyi Galbeed ee Siyaasiyiinta Beesha Maamusho Gobolada Waqooyi Ay Isticmalaan
By WARIYAHA HARGEYSA On Aug 14, 2019
Waxaa isa soo taraya in ay shaaca qaadaan ama si waadix oo cad looga wada hadlo, hadda kadib siyaasadda dhabta ah ee ay ku dhisan tahay maalmulka Somaliland, tan oo muddo badan ay is diidsiin jireen beelaha darifyadu si hoosana ay u maarayn jireen beesha dhexe.
Maamulka Somaliland ayaa lagaga dhawaaqay shir ka dhacay magaalada Burco sanadku markuu ahaa 1991-dii, kaas oo loogu handaday beelaha darfiyadda, khasabna lagaga dhigay in ay taageeraan go’aanka beesha dhex ee ahaa in laga gooyo gobolada waqooyi Soomaliya inteeda kale.
Beesha dhexe oo rajo ka qabtay in la ictiraafo, ayaa samaysay isbedal degdeg ah, iyada oo talada laga saaray calan castii SNM ee markaa maamulka haysay, waxaana la soo dhisay dawlad shacab oo beelaha darifyadda la siiyey 55% talada maamulka, si loogu qanciyo beelaha aan ahayn Isaaqa iyo beesha caalamka in ay jirto cadaalad iyo nabadi.
Waxaase taa ka biyo diiday beelo ka mid ah beesha dhexe iyadda oo uu bilaabmay dagaal sokeeyo oo u dhaxeeya iyaga, jactad iyo daal badan ka dib, waxa ay noqotay in kuraasidii laga kiciyo beelaha darifyadda, taas oo ilaa hadda socota.
Kadib quus ay ka qaadeen beesha dhexe in la ictaaro, waxay gaareen go’aan ay isku caleema saareen in ay iyagu leeyihiin gobolada waqooyi, dadka kalana la dagan yahay, cid aan iyaga ahayna aan talada goboladaa wax laga waydiin karin.
Waxayna soo saareen qodobada hoos ku qoran oo ay si hoose u maarayn jireen.
Waxay joojeen oo ay danbi ka dhigeen in siyaasi ama qof kale oo ka soo jeeda gobolada darifyadu aan lagu dari karin guddiga wadahadalada ee laga soo xulo Soomaliya.
-In huteelada lagaga tago oo ayna shirka ka qayb gali karin xubinta ama labbada xubnood ee guddiga ay Somaliland u xulatoo wadahadalada Soomaliya ee lagag daro beelaha darifyadda.
Waxaa meesha laga saaray in lagu daro wafdiyadda beesha caalamka ay u dirto Somaliland, xubno ka socda beelaha darifyadda.
In waftiyadda beesha caalamka ama hay’adaha kale ayna dhaafi karin magaalada Hargaysa ayna la kulmi karaan kaliya beesha dhexe, iyadda oo hadda uu yahay wasiirka arimaha dibadu beelaha darifyadda balse uu ilaa hadda la kulmo wasiirkii hore ee arimaha dibadu oo ka soo jeeda beesha dhexe.
In ay danbi wayn tahay qofka ka soo jeeda gobolada darifyaduu uu Xamar tago, balse beesha dhexe ay tagi karto lana kulmi karto madaxda Soomaliya.
In aan dheg loo dhigin qaylada iyo cabashada beelaha darifyada, hadii gacan ka hadal bilaabaana lala dagaalamo, sida ku cad heshiiskii Burco.
Iyadda oo ay sidaas tahay beelaha darifyadu way is diidsiiyaan in ay ka hadlaan xaqiiqada dhabta ah, iyaga oo intooda badani dagaal ugu jira, qoondada beesha dhex u qoondayso gobolkoog in ay qaataan inteeda badan, taas oo sobobtay in loo kala badiyo wax ka sheegashadda beelaha kale, iyadda oo la gaarsiiyey hogaanka dhaqankana in ayna salaami karin oo ay ka baxsadaan kolba ka dhaliila maamulka Hargaysa ama dagaal kala hor yimaada.
WARIYAHA HARGEYSA119 posts 0 comments